OnePlus6ကို တရုတ်နိုင်ငံမှာ မေလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ တရားဝင်မိတ်ဆက်မယ်
25 Apr 2018 . 11:48 AM
Flagship Killer လို့ လူသိများတဲ့ OnePlus ကုမ္ပဏီကနေ အခုအချိန်မှာတော့ OnePlus6စမတ်ဖုန်းကို တရားဝင်ကြေငြာမယ့်အချိန်ကို တရားဝင်ကြေငြာလိုက်ပါပြီ။
OnePlus က အခုသတင်းကို OnePlus ရဲ့ China Website မှာ ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ တရုတ်နိုင်ငံ ဘေကျင်းမြို့မှာ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၀ နာရီမှာ မိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု OnePlus6Launch Event က ပြီးခဲ့တဲ့ OnePlus 5T Event လိုမျိုး Press Show ပုံစံပဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး OnePlus Fans တွေအတွက်ကတော့ ၁၅ ဒေါ်လာ နဲ့ ညီမျှတဲ့ ၉၉ ယွမ်နဲ့ လတ်မှတ်တွေကို ဧပြီရယ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ရောင်းချသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
OnePlus6ရဲ့ ဒီတစ်ခါ Tagline ကိုတော့ The Speed You Need လို့ နာမည်ပေးထားပြီးတော့ အခု OnePlus6ဖုန်းက Qualcomm Snapdrago 845 Processor နဲ့ RAM 8GB ပါဝင်လာမယ့်အတွက် လက်ရှိအချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသော စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
OnePlus6Design
OnePlus6စမတ်ဖုန်းမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ သိထားတဲ့သတင်းတွေအရတော့ Glass Body ၊ Notch ပါဝင်လာမယ့် Display နဲ့ Water Resistant Feature တွေပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ အခြားသော အချက်အလက်တွေကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။
Flagship Killer လို့ လူသိမြားတဲ့ OnePlus ကုမ်ပဏီကနေ အခုအခြိနျမှာတော့ OnePlus6စမတျဖုနျးကို တရားဝငျကွငွောမယျ့အခြိနျကို တရားဝငျကွငွောလိုကျပါပွီ။
OnePlus က အခုသတငျးကို OnePlus ရဲ့ China Website မှာ ကွငွောခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ တရုတျနိုငျငံ ဘကေငျြးမွို့မှာ ဒသေစံတျောခြိနျ ၁၀ နာရီမှာ မိတျဆကျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ အခု OnePlus6Launch Event က ပွီးခဲ့တဲ့ OnePlus 5T Event လိုမြိုး Press Show ပုံစံပဲပွုလုပျသှားမှာဖွဈပွီး OnePlus Fans တှအေတှကျကတော့ ၁၅ ဒျေါလာ နဲ့ ညီမြှတဲ့ ၉၉ ယှမျနဲ့ လတျမှတျတှကေို ဧပွီရယျလ ၂၇ ရကျနမှေ့ာ ရောငျးခသြှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
OnePlus6ရဲ့ ဒီတဈခါ Tagline ကိုတော့ The Speed You Need လို့ နာမညျပေးထားပွီးတော့ အခု OnePlus6ဖုနျးက Qualcomm Snapdrago 845 Processor နဲ့ RAM 8GB ပါဝငျလာမယျ့အတှကျ လကျရှိအခြိနျမှာ အမွနျဆုံးသော စမတျဖုနျးတဈခုဖွဈလာမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
OnePlus6စမတျဖုနျးမှာ လကျရှိအခြိနျအထိ သိထားတဲ့သတငျးတှအေရတော့ Glass Body ၊ Notch ပါဝငျလာမယျ့ Display နဲ့ Water Resistant Feature တှပေါဝငျလာမှာဖွဈပွီးတော့ အခွားသော အခကျြအလကျတှကေိုတော့ အတိအကြ မသိရသေးပါဘူး။
by Zawyè .7hours ago